20June2013 KNG ကချင်KNG အင်္ဂလိပ်
You are here: Home ဆောင်းပါး စီးပွါးရေး ယင်ဂျန်းတွင် ငလျင်ဖြစ်ပြီးနောက် ကျောက်စိမ်းဈေးကွက်ထိုးကျ
In စီးပွါးရေး Post 22 March 2011 Last Updated on 02 August 2011 By Nun Pan/KNG
Hits: 7767 Prev
မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ ၁ သောင်းနီးပါး အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် တရုတ်မြန်မာနယ်စပ် ယူနန်ပြည်နယ် ယင်းဂျန်းမြို့နယ်တွင် လွန်ခဲ့သည့် အပတ်တွင်း ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် ကျောက်စိမ်းဈေးကွက် ထိုးကျ၍ မြန်မာကျောက်ကုန်သည်များအရှုံးပေါ်နေသည်။
ငလျင်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေအနည်းအများရှိပြီး ကျောက်ဝယ်သူတွေသူဌေးများပြန်ကုန်ကြပြီး ဈေးကွက် ပျက်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကချင်ကျောက်ကုန်သည်တစ်ဦးမှ ပြောသည်။
“ဒီဟာလေးနဲ့ပဲ တပိုင်တနိုင်လုပ်နေတဲ့အခါကျတော့ ဆုံးရှုံးမှုအပိုင်းက တော်တော်လေးရှိတာပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ငွေလေးလိုက်လုပ်တဲ့အခါ တခါထအဲကျောက်ဈေးက အဲလိုထိုးကျသွားကျောက်ဈေးက ထိုးကျသွားတာ လောပန်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ ရောင်းရခက်ပြီလေ။ ဒီနေရာတွေက ကျောက်တွေကပုံနေတယ်။ လောပန်းကမရှိဘူးဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့စားရေးသောက်ရေးကအစ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုကတော့ တော်တော်လေး ရှိသွားတာပေါ့။”သာမန်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် ပစ္စည်းများထားခဲ့၍နေရပ်ကိုပြန်သွားနိုင်ကြသော်လည်း တရုတ်ဈေးကွက်တွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ကြီးကြီးမားမားလုပ်နေသော မြန်မာကျောက်ကုန်သည်များမှာ ဈေးကွက်ပုံမှန်ဖြစ်လာချိန်ထိ စောင့်ဆိုင်းရင်း တခြားတရုတ်နယ်စပ် ရွှေလီ၊ ဂျန်ခေါင်၊ ဂျေခေါင် ဈေးကွက်များဆီ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာတွင် ပို၍အခက်ကြုံနေရသည်ဟု ၄င်းဆိုသည်။“တချို့တွေကျောက်တွေကျတော့လည်း မြေကြီးထဲမြုပ်သွား ပါသွားတာလည်းရှိတယ်။ တချို့ကပြန်ရတာလည်းရှိတာပေါ့။ တချို့က အစပဲရောက်သေးတယ် ကုမ္ပဏီကအိမ်တွေပြိုကျလို့ မရတဲ့ဟာလည်းရှိတာပေါ့။ ကျောက်က ပြန်မရောင်းရ စားဖို့သောက်ဖို့က ခက်ခဲ အဓိကတော့ ဒီအခက်ခဲတွေကြုံတာပဲ။”ယခုချိန်ထိလည်း ငလျင်အသေးစားများ ဆက်တိုက်လှုပ်နေပြီး တရုတ်အစိုးရမှလည်း ပြည်သူများအား နောက်ထပ်ငလျင်လာဖွယ်ရှိကြောင်း သတိပေးပြောဆိုထားသည့်အတွက် ဒေသခံများ အိမ်အဆောက်အုံတွင်းမနေကြတော့ပဲ ကားလမ်းနံဘေး လွတ်ရာလမ်းပေါ်တွင် စားစရာစုများနှင့် အလုအယက်နေရာယူကြသောကြောင့် ဈေးကွက်များသည် ချက်ချင်းပုံမှန် အခြေအနေသို့ဖြစ်လာနိုင်ချေမရှိသေးကြောင်း ပြောသည်။“အိမ်ပြန်တဲ့သူတွေကျတော့လည်း အခု အခြေနေပြန်ကောင်းလို့ရှိရင်တော့ ဒီတချို့တွေကျတော့ ဘက်ဖိုးနဲ့ပြန်ဖော်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိတယ်။ ဒီဟာတွေသူတို့ အခြေနေတွေနည်းနည်းကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပြန်လာဖို့အကြောင်းရှိတာပေါ့။ ကိုယ့်ပစ္စည်းတွေထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ အခြေနေတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ ပြန်သွားဖို့အလားအလာတော့ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် စီးပွားရေးကတော့ အဲဒီဒေသမှာ ရည်ရှည်တော့ အရင်ကပုံစံအတိုင်းဖြစ်ဖို့က ခဲယဉ်းမယ်လို့ထင်တယ်။” တရုတ်ဈေးကွက်တွင်း ကျောက်စိမ်းသည်အရောင်းအ၀ယ်ကောင်းသည့် ဈေးကွက်ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာကျောက်စိမ်းကုန်သည်များသည် ယင်ဂျန်းမြို့နယ်တွင်မှာပင် ထောင်ချီ မြုပ်နှံနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကျောက်သည်များပြောသည်။ယခုချိန်တွင် ငလျင်ကြောင့်တရုတ်သူဌေးများ ကြောက်လန့်၍ ပြန်ကုန်ကြရာ ကျောက်များကို ပွဲရုံတွင် စုပုံနေပြီး ၀ယ်သူမရှိဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရည်ရှည် အရင်းအနှီးအားလုံးအရှုံးခံသွားနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ကျောက်ကုန်သည်များစိုးရိမ်နေကြသည်။ယင်ဂျန်းငလျင်ကြောင့် လူ အယောက် ၂၀ ကျော်သေဆုံးပြီး အဆောက်အအုံတချို့ပျက်စီးကာ အယောက် ၂၀၀ ထက်မနည်း ဒာဏ်ရာရရှိသွားသည့်အဖြစ်အပျက်တွင်နယ်စပ်ခြင်းထိစပ်နေသည့် ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း ကြုံလာနိုင်စရာရှိသည့်အတွက် အသက်အန္တရာယ်ထိ ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်သည်ဟု နယ်စပ်တွင်ရှိနေသော ကိုအောင်ဝါမှ သုံးသပ်သည်။
“ကျွန်တော်တို့ ဒီဖြစ်ဖြစ်ခြင်းအဲဒီအချိန်မှာ ရွှေလီ မူဆယ်ဘက်မှာလည်း ငလျင်လှုပ်တယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တော့ ဒီငလျင်ကြောဟာ ပြင်းအားများတယ်ဆိုရင်တော့ တစုံတခုတော့ ထိခိုက်မှုတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ဒီယင်ဂျန်းဖြစ်တဲ့ ၅.၈ အခြေအနေတောင်မှ မြစ်ကြီးနားဖက် အနည်းငယ်လှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြင်းအားကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ မြစ်ကြီးနားဘက်လည်း နီးတယ်ဆိုတော့ တစုံတခုတော့ထိခိုက်မှုဖြစ်မယ်။ ငလျင်ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူမှခန့်မှန်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လောက်ပြင်းတယ် နှေးတယ်ဆိုတာမသိဘူး။ ဒါကြောင့် ပြင်းအားရှိမယ်ဆိုရင် အကုန်လုံး ထိခိုက်မှုနဲ့ကြုံမယ် အန္တရာယ်နဲ့ကြုံမယ် ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ စိုးရိမ်နေတယ်။”ယခင် တရုတ်ပြည်နယ်တွင် ငလျင်လှုပ်မှုဖြစ်ပွားသည့်အချိန် ကချင်ပြည်နယ်တွင်း တစ်ဆက်တည်း လှုပ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတတ်သည်။ ထို့ပြင် ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားတွင် တည်ဆောက်နေသော မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းသည်လည်း ကမ္ဘာတွင် ၁၅ ခုမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်၍ စကိုင်းငလျင်ကြောနှင့်လည်းနီးစပ်နေသည်ဟု သိရသည်။
KIA မှ အစိုးရစစ်ရဟတ်ယာဉ် ၁ စင်း ပစ်ချ၊ ၃ စင်း ပျောက်ဆုံး
မြန်မာတပ် အမြောက်ဆံသင့်သော ဆရာမ မိုင်းအောင်၌ ထူးခြားသည့်လက္ခဏာပြ
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချူပ်က ၎င်း၏စာရေးမအား နားရွက်ဆွဲ ပါးရိုက်
တရုတ်အမျိုးသမီး ၃ ဦးအား မြန်မာစစ်တပ်က အုပ်စုလိုက် အဓ္ဓမပြုကျင့်
တရုတ်အမျိုးသမီး ၉ ဦးအား မြန်မာစစ်သားများ အဓ္ဓမပြုကျင့် သတ်ဖြတ်
ရွှေမှော်တွင် ကချင်အမျိုးသမီးငယ်များ လိင်ကျွန်အဖြစ် စေခိုင်းခံရ
KIAနှင့် တစ်ရက်တည်း တိုက်ပွဲမှာ မြန်မာစစ်သား ၆၀ကျော် ကျ
တရုတ်က မိမိနယ်နိမိတ်ထဲ မြန်မာစစ်သားများ သယ်ပို့ပေး
Search... Copyright © 2011 ကချင်သတင်းဌာန. All Rights Reserved.